Isamsung yazisa i-Galaxy A40 kunye neGPS A70 eSpain | I-Androidsis
I-Samsung Galaxy A40 kunye ne-A70 zifika eSpain
Uluhlu oluphakathi lweSamsung yenye yezona zinto ziphambili kwezi veki. Sikwazile ukubona iifowuni ezininzi ngophawu ukuza kuthi ga ngoku. Kancinci kancinci bayafikelela nasezivenkileni. Yimeko yeemodeli ezimbini kule meko. I-Galaxy A40 kunye neGPS A70 sele zisungulwe ngokusemthethweni eSpain. Iinketho ezimbini ezintsha kuluhlu oluphakathi.
Ezi fowuni zimbini zaziswe kutshanje. Ungabona konke malunga neGalaxy A70 apha kwaye kule khonkco malunga neGalaxy A40. Iimodeli ezimbini ezahlukeneyo, kodwa zibonisa ifayile ye iinketho ezininzi ezinikezelwa yi-Samsung kolu luhlu. Ngoku, banokuthengwa kwimarike yaseSpain.
Ezi fowuni zazisele zazisiwe. Nangona kumsitho we-Samsung kule veki, apho i-Galaxy A80 ibonisiwe, basishiye neenkcukacha malunga nale modeli. Phakathi kwabo, ukwaziswa ababeza kuba nako. Into esele yenzekile kwimarike yaseSpain. Zingathengwa kwiindawo zeefowuni zorhwebo zaseKorea eziqhelekileyo.
I-Galaxy A40 yimodeli elula yezi zimbini. Ke ngoko, ngexabiso eliphantsi kwezi fowuni zimbini. Isungulwe eSpain ngexabiso lama-euro angama-249, kuhlobo lwayo kuphela lwe-RAM kunye nokugcinwa. Abo banomdla bangayithenga nge-white, coral, blue and black. Iyafumaneka ngoku kwivenkile yeSamsung. Ukusukela nge-17 ka-Epreli izakuqaliswa kwiivenkile ezininzi.
Kwelinye icala sine-Galaxy A70, eyona modeli igqibeleleyo. Kule meko, ifika eSpain ngokudityaniswa okukodwa kwe-RAM kunye nokugcinwa. Ixabiso layo lokwazisa ngama-399 euros. Abasebenzisi banokuyithenga ngombala omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka kunye nekorale. Kwimeko yakho, kuya kufuneka ulinde de kube ngu-Epreli 25 ukuze ifumaneke kuzo zonke iivenkile.
Ngaphandle kwamathandabuzo, ezi I-Galaxy A40 kunye ne-Galaxy A70 inceda ukugqibezela eli banga liphakathi Yophawu lwaseKorea ngaphezulu. Zimbini iindlela ezilungileyo onokuthi uziqwalasele. Ke ukuba kukho abanye abanomdla kuwe, kule nyanga uya kuba nakho ukuzithenga ngokusemthethweni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy A40 kunye ne-A70 zifika eSpain
I-Android Pie ngoku iyafumaneka kwiGalaxy Tab S4